Vaovao farany Avy any Indiafoxtecho ao amin'ny DCS MB-339
Fampidinana: 6,883 alaina 920,216 fotoana.
Ity misy fanavaozana haingana (be fangatahana) ao amin'ny DCS MB-339: aorian'ny fahazoana simba feno, simika hydraulic sy elektrika, ny ekipan'ny kaody dia miasa mafy mba hamenoana ny ambiny fonosana - satria mila soratana hatramin'ny voalohany ny DCS, tsy asa mora izany ... ary hasehonay anao ireo fiasa vaovao rehefa vonona izy ireo.
Mandritra izany fotoana izany dia nanatsara antsipiriany kely maromaro ny ekipan'ny kantontsika raha ny endrika maodely ivelany kosa nohaverina foronina amin'ny antsipiriany sy ny fahamendrehana amin'ny fahitana.
Raha miresaka ny MB-339 dia hanana fanavaozana ny MSFS mivoaha afaka andro vitsivitsy (antenaiko) hanamboatra bug kely (tena) maromaro ary manampy endri-javatra roa. Aza manantena fiovana lehibe, fa manao izay fara herinay izahay mba hanatsarana ny vokatra.